Nne kacha nta na UK nke a ga-ekwu na ọ mụrụ nwa bụ nwa agbọghọ dị afọ 11 - Ndụ
Nne kacha nta na UK nke a ga-ekwu na ọ mụrụ nwa bụ nwa agbọghọ dị afọ 11
Nne nke ọdụdụ nwa ga-amụ nwa na United Kingdom ugbu a ka ọ dị afọ iri na otu.
ihe nkiri na -apụta na netflix
Anyanwụ na -akọ na nwa ahụ chọpụtara na ọ dị ime mgbe ọ dị afọ 10, na ezinụlọ ya amaghị na ọ dị ime. Ọ bịara dị ka nnukwu ihe ijuanya, onye nyocha nke maara ezinụlọ gwara ọpụpụ ahụ.
Nwatakịrị nwanyị ahụ nọ ihe karịrị izu iri atọ mgbe ọ mụrụ nwa, ma ya ma nwa ahụ nwere ahụ ike. Enyemaka ọkachamara gbara ya gburugburu ugbu a. Isi ihe bụ na ya na nwa ahụ dị mma, onye nyocha ahụ kwukwara. Enwere ajụjụ gbasara ihe kpatara na ndị mmadụ amaghị. Nke ahụ na -echegbu onwe ya.
Ndị ọrụ na -elekọta mmadụ amalitela nyocha maka afọ ime ya. Dr. Carol Cooper gwara akwụkwọ akụkọ, Nke a bụ nne kacha nta Ive nụrụ. Ọ kọwara na ọ bụ ezie na nwa agbọghọ nwere ike itozu oke oge ọ bụla n'agbata afọ asatọ na 14, nkezi afọ ya bụ 11.
Ibu ibu na -emetụta ọtụtụ homonụ. Ebe ọ bụ na ụmụaka na -ebuwanye ibu, oge ntorobịa na -eme n'oge ndị a. Ọ gara n'ihu, nwere nnukwu ihe ize ndụ nke nwa dị obere ibu, pre-eclampsia, ọrụ akaghi aka, na ọtụtụ ọrịa.
Na mbụ, nne nke ọdụdụ nwa ga-amụ na UK bụ Tressa Middleton, onye mụrụ nwa ya na 2006 mgbe ọ dị afọ 12. Afọ ole na ole ka e mesịrị, na 2014, nne dị afọ 12 na nna dị afọ 13 mụrụ nwa. nye nwata, bụrụ nne na nna kacha nta na UK.
esi kpuchie achicha na fondant maka beginners
kedu ihe na -eme pusi meme
travis scott jordan 6 ụbọchị mwepụta
esi eme achịcha site na nzọụkwụ